Xarunta Waxbarashada ee Anadol ayaa maanta si rasmi ah looga furay magaalada Muqdisho – idalenews.com
Xarunta Waxbarashada ee Anadol ayaa maanta si rasmi ah looga furay magaalada Muqdisho, iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xariga ka jaray Xaruntan waxbarashada.
Dhismaha xaruntan waxbarashada oo soo socday muddo sanad iyo bar ah ayaa waxaa iska kaashaday Hey’adda Zamzam Foundation iyo Hey’adda IHH ee dalka Turkiga oo muddo 15-sano la laheyd wada shaqeyn.
Xaruntan Waxbarashada Anadol ayaa waxaa wax ku baranaya afar boqol oo agoon ah oo jiifaneysa iyo ilaa kun arday, iyadoo dhamaan adeegyada aas aasiga ah ay u dhameystiran yihiin sida Masaajid, meelo caruurta ku ciyaaraan iyo qeybo jiif ah oo ardayda agoonta loogu tala galay.
Munaasabada ayaa waxaa ka hadlay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo soo dhoweeyay tallaabadan, waxaana uu ku amaanay hey’adaha iska kaashaday dhismaha xaruntan inay qeyb ka qaadanayaan xanaaneynta Agoonta iyo waxbarashadooda.
Madaxa Zamzam Foundation Shuceyb Abdalla Dhiif ayaa isna sheegay in Hey’adda Zamzam ay Soomaaliya ka shaqeyneysay tan iyo 1992-dii, isla markaana ay ka qeyb qaadaneysa howlaha sama falka, sida dhismaha goobaha waxbarashada, gar gaarka bani’aadanimada iyo caafimaadka.
Ugu dambeyn Xaruntan Waxbarashada Anadol oo ku taal duleedka degmada Wadajir ayaa noqoneysa qeyb ka noqoneysa howlaha mashaariicda ay Turkiga ka hirgelineyso magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya, kuwaasoo isugu jira goobaha waxbarashada, caafimaadka iyo kuwa kale.
Shir Balaaran oo looga soo horjeedo Maamul Goboleedka Jubbaland oo ka dhacey Melbourne Australia